နောဧသည် စိတ်တော်နှင့်တွေ့သည်အကျဉ်းချုပ | Noah Found Grace! | Real Conversion
( (ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဒေသနာ # ၉) )
(SER,MON #19 ON THE BOOK OF GENESIS)
ဇွန်လ( ၂၄ )ရက်၊ စနေနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“ထို့နောက်၊ ထာဝရဘုရားသခင်သည် နောဧကို တဖန် မိန့် တော်မူပြန်သည်ကား၊ ဤကာလအမျိုးတွင် သင်သည် ငါ့ရှေ့ ၌ ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကို ငါသိမြင်သည်ဖြစ်၍၊ သင်၏အိမ်သူ အိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွ၊ သင်္ဘောထဲသို့ဝင်ကြလော့။”
( ကမ္ဘာဦး ၇း ၁ ) )
နောဧသည် ကောင်းသောသူဖြစ်သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်က “သင့်ကို ဖြောင့်မတ်သောသူအဖြစ် ငါမြင်သည်” ( ကမ္ဘာဦး ၇း ၁ ) သော ကြောင့် နောဧသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့အား မြောင့်မတ် သောသူအဖြစ် မြင်တော်မူခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အဖြေက ရိုးရှင်းလှပါသည်။ ကမ္ဘာ ဦးကျမ်း အခန်းကြီး ခြောက်၊ အပိုဒ်ငယ် ရှစ်တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ သင်တို့ကျမ်းစာအုပ်များကို ကျေးဇူးပြု၍ လှန်ကြည့်ကြပါ။
( ကမ္ဘာဦး ၆း ၈ ) )
နောဧသည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်တွင် မျက်နှာရသောသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် က “ဤလူမျိုးတို့တွင် သင်သည် ငါ့ရှေ့၌ မျက်နှာရသောသူဖြစ်သည်” ( ကမ္ဘာဦး ၇း ၁ ) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ဤအရာက တဖြစ်လှဲ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု သမုတ်သည်။ ဟေဗြဲ ၁၁း ၇ က နောဧသည် ယုံကြည်သောအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အတိအလင်း ဖော်ပြ ထားပါသည်။
“နောဧသည် …….ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍၊ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ သင်္ဘောကို တည်လေ ၏။”
( ဟေဗြဲ ၁၁း ၇ ) )
ကျွန်ုပ်က ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောဆိုရမည်။ နောဧသည် မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကောင်းသော အကျင့်ရှိသောသူဖြစ်သော်လည်း သူ၏ကောင်းသောအကျင့်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်း သို့ရောက်သည်မဟုတ်။ သူသည် ပြည့်စုံသောသူ၊ စုံလင်သောသူတော့မဟုတ်ပါ။ ရေလွှမ်းမိုး ခြင်းနောက်ပိုင်း စပျစ်ရည်သောက်ကြူးခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက ရှင်းရှင်းလင်း လင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ( ကမ္ဘာဦး ၉း ၂၀-၂၁ ) ကျွန်ုပ်တို့သည် နောဧပြုသောအပြစ်ကို နား လည်ခွင့်လွှင့်နိုင်ပါသည်။ သူသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောစစ်ဆေးမှုကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသည်။ စပျစ်ရည်လေး တမြေ့မြေ့သောက်ရင်း ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကြောက်ရွံ့ဖွယ်အ တွေ့အကြုံကို လျှော့ချလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် အမှားအယွင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီ မြေကြီးတပြင်လုံးတွင် ထိုသို့သောအပြစ်အပျက်သည် မရှိဖူးသောကြောင့် စပျစ်ရည်သည် သူ့အား အဘယ်သို့ဖြစ်စေမည်ကိုပင် မသိသည်လည်း ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ သမ္မာကျမ်းစာက နောဧသည် ပြည့်စုံသောသူဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြမ ထားပါ။ သို့ရာတွင် သန့်ရှင်းသူများပြောဆိုသကဲ့သို့ဆိုရလျှင် “ပြစ်မှားသော်လည်း ဖြောင့်မတ် သည်” ဟုဆိုရမည်။ သူသည် စုံလင်သောသူမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်လူ့ဇာတိမခံယူမှီအချိန်တွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်တွင် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ပါသည်။ နောဧသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သည်။ ၎င်းမှာ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရရှိထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ( ကမ္ဘာဦး ၆း ၈ ) နောဧသည် ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းတရားကို လက်တွေ့အသုံးချ လာသောအခါ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ် မှတ်တော်မူသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတွင် သမ္မာကျမ်းစာက ဤအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး အံ့ ဩစရာရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရောမ အခန်းကြီး လေး၊ အပိုဒ်ငယ် ငါးနှင့်ခြောက်ကို နား ထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
“အကျင့်မရှိသောသူမည်သည်ကား၊ မတရားသောသူ၏အပြစ်ကို ဖြေသောသူကိုယုံကြည်လျှင်၊ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ် ခြင်းကဲ့သို့မှတ်လျက်ရှိ၏။ ထို့အတူ ဘုရားသခင်သည် အကျင့်ကို မထောက်ဘဲလျက် ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရသော သူ၏မင်္ဂလာကို ဒါဝိဒ်သည် ရည်မှတ်၍ဆိုသည်ကား၊ အပြစ်မှ လွတ်ခြင်း၊ ဒုစရိုက်အပြစ်မှဖုံးအုပ်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။” ( ရောမ ၄း ၅-၇ )
ဘုရားသခင်သည် နောဧအား “ဤကာလ၌ သင့်အမျိုးတွင် သင်သည် ငါ့ရှေ့၌ ဖြောင့် မတ်ကြောင်းကို ငါမြင်၏” ဟုဆိုသောအခါ ( ကမ္ဘာဦး ၇း ၁ ) နောဧပြစ်မှားသောအပြစ်ကို မမြင်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်း၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ၎င်းသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကာလ ၏ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ “ဆိုလာဖစ်” ခရစ်တော်တစ်ပါးတည်း၌ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ နောဧသည် ကောင်းသောအကျင့်အားဖြင့် ကယ် တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်။ လူ့ဇာတိခံယူမွေးဖွါးလာသောခရစ်တော်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်။
သင်္ဘောတစ်ခုတည်းကိုသာ မစဉ်းစားမိပါနှင့်။ သင်္ဘောသည် လှေမဟုတ်ပါ။ ရွှင့် လွှတ်ဖို့ တည်ဆောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရှည်လျားပြီး နက်မှောင်သော အဖျားချွန်လျက် အ ဆုံးသတ်ထားသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ထင်းရှုးစေးဖြင့် ပတ်ချာလည် ဖုံးအုပ်ထားပါ သည်။ ဒေါက်တာ McGee က သင်္ဘောနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဤကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပေးထားသည်။
သင်္ဘောနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူအများစုတွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဖိအားသည် လှေပေအန္တမ်းတစ်ခုအလား ပြုလုပ်ထားသောဆန်း ဒေးစကူးလ်လေးပေးထားသော ဖိနှိပ်မှုအားသာဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ် အတွက်ဆိုရလျှင် ရယ်မောဖွယ်လုပ်ဆောင်ထားသောအရာတစ်ခု သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်သည်အတိုင်း ထွက်ပေါ်လာသော ပုံ အ စား သင်္ဘောပြက်လုံးမျှသာဖြစ်ပါသည်။
ထိုအရာကို အစပြုဖို့ရန်အတွက် သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်း အကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည် ညွှန်းကြားချက်က ဆိုဒ်စုံဖြစ်သည် ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ “သင်္ဘောအရှည်မှာ ကုဗပေသုံးရာရှိပါ သည်။” ကုဗတစ်ခုသည် တစ်ဆယ့်ရှစ်ပေရှိမည်ဆိုလျှင် အဘယ် မျှလောက်ရှည်လျားမည်ကို တွေးတော၍ရနိုင်ပါသည်။
ထိုခေတ်ထိုကာလတွင် အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိမည်နည်း ဟူသော မေးခွန်းထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂူအောင်းလူသားများနှင့်ပတ်သက် သက်ဆိုင်နေ ကြသည်မဟုတ်။ အသိဥာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောလူသားများအ အဖြစ် ရှိနေကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောဧမှစတင်၍ အသိ ဥာဏ်ကြွယ်သောလူသားအနေဖြင့် ယနေ့ထိရှိနေကြသည်မှာ သင့်အမြင်ပဲမဟုတ်ပါလား။ နောဧသည်လည်း အသိဥာဏ်ရှိသော သူဖြစ်သည်။
နောဧသည် လှိုင်းအမြင်ပေ ငါးဆယ်ကိုဖြတ်သန်းမည့် ပင် လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးကို တည်ဆောက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူ တည်ဆောက်နေသည်မှာ အသက်တည်ရာ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၏အ သက်တည်ရာ၊ လူတို့၏အသက်တည်ရာဖြစ်ပြီး ကာလအချိန်ကြာ မြင့်စွာ နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ဖို့မဟုတ်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကုန်ဆုံးချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းရုံသက်သက်သာဖြစ် သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်၊ သင်္ဘောသည် သင်ရှာဖွေနေသော ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးမားတွင်ရှိသည့်အရာတွေလိုအပ်လျက် ရှိ ကောင်းရှိနိုင်သည်။ အခန်းပေါင်းများစွာရှိသည်။ (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, ၁၉၈၃၊ အတွဲ ၁၊ စာ- ၃၉) )
Whitcomb နှင့် Morris တို့က ဗာဗုလုန်လူမျိုးသည် ကုဗ ၁၉.၈ လက်မရှိပြီး အီဂျစ် လူမျိုး သည် ကုဗ ၂၀. ၆၅ လက်မရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ Whitcomb နှင့် Morris တို့က ဟေဗြဲလူမျိုးတို့သည် ကုဗ ၂၀. ၄ လက်မရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ (John C. Whitcomb နှင့် Henry M. Morris, ကမ္ဘာဦး ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်း၊ ဖရက်စ်ဘက်တီးရီးယာန်းနှင့်ရီဖောင်း ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၉၃၊ စာ- ၁၀ ) ထိုအချက်က သင်္ဘောသည် ငါးရာနှင့်တပေအရှည်ရှိသည်ဟု ဆို သည်။ လော့ခ်အိန်ဂျယ်တွင်ရှိသော ဘုရင်မ မေရီက ၁၀၁၈ ပေရှည်ပြီး သင်္ဘောအရှည်နှစ်ဆ လောက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရင်မမေရိ၏အကျယ်သည် စက်နှင့်အခြားစက်များဖြင့် ချဲ့ထွင် သည်။ ဤသင်္ဘောထဲတွင် စက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်သောအရာမရှိပါ။ အခေါင်းကြီးသားဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်္ဘောပေါ်တွင်ရှိသော လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့အတွက် သင့်လျော်သောအရာသာ ဖြစ်ပြီး ဘုရင်မမေရိဟောခန်းထက် သာ၍ကြီးမားသော အခန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာ Whitcomb နှင့် ဒေါက်တာ Morris တို့သည် သင်္ဘော၏သာမန်အရွယ်အ စားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို ညွှန်းဆိုထားသည်ဟု ဆိုရာတွင် မှန်ကန်သော အ ရာကို ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့သောသင်္ဘောသည် ဒေသန္တာရအစားအစာအတွက် ထိုအရာ များမှာ မလိုပ်သည်သာမကာ သင်္ဘောအတွက်လည်း မလိုအပ်လှ ပေ။ ထိုသို့သောသင်္ဘောကို တည်ဆောက်ခြင်းအစီအစဉ်တွင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပါဝင်ခြင်း၊ အကြောင်းမှာ ဒေသ န္တာရအစားအစာမှလွတ်မြောက်ရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အ ခြားအရာများထက် ဖော်ပြရန် ခေတ်ခဲလွန်းလှသည်။ သို့ရာတွင် မိုက်မဲရာကျပြီး မလိုအပ်သောအရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျရောက် အံ့ဆဲဆဲဘေးဒဏ်အတွက် နောဧကို သတိပေးထားခြင်းမျိုးသည် ဘုရားသခင်အတွက် အဘယ်မျှလောက် အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှု ရှိပါသနည်း။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့် ထိခိုက်မှု မရှိစေနိုင်သောနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးထားသည်။ လောတ သည် ပင်လျှင် ကောင်းကင်မှကျသောမီးမတိုင်မှီ သောဒုံမြို့မှ ဆောင်ယူခြင်းကို ခံခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရုံမက၊ တိရိစ္ဆာန်အမျိုးပေါင်း များစွာဖြစ်သော ငှက်အမျိုးပေါင်းတို့ကိုလည်း လွတ်မြောက်ခဲ့ သည်။ လွယ်လင့်တကူ ရွေ့ပြောင်းနိုင်ကြသည်။ သူတို့သည် ထား ရာနေရာ အခန်းမရှိဘဲ သင်္ဘောထဲတွင် အချိန်နာရီပေါင်းများစွာ ရှိနေနိုင်ကြသည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် အရှေ့ပိုင်းအချို့တို့တွင် သာနယ်နမိတ်သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ပုံပြင်တစ်ခု လုံးက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဝန်ထုပ်ဖြစ်စေမည်။ (John C. Whitcomb and Henry M. Morris, ကမ္ဘာဦး ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ ပရက်ဘက်တီး ရီးယာန်းနှင့်ပြုပြင်၊ ၁၉၉၃၊ စာ- ၁၁ ) )
ယနေ့ချိန်တွင် အလွန်ပင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော သင်္ဘောအကြောင်းအရာများ စွာ ရှိပါသည်။ ထိုအရာထဲတွင် အကြောင်းအရာသုံးခုအကြောင်းကို ယနေ့ ဆင်ခြင်စေလိုပါ သည်။
၁။	ပထမအချက်၊ သင်္ဘောက ကယ်တင်ခြင်းရမည်အကြောင်း ခရစ်တော်၌ ရှိနေ ရမည်ဟု သွန်သင်ထားပါသည်။
“ထို့နောက်၊ ထာဝရဘုရားသခင်သည် နောဧကို သင်၏အိမ်သူ အိမ်သား အပေါင်းတို့နှင့်တကွ၊ သင်္ဘောထဲသို့ဝင်ကြလော့။” ( ကမ္ဘာဦး ၇း ၁ ) )
ယခုတွင် ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး ခုနှစ်၊ အပိုဒ် တစ်ဆယ့်ခြောက်ကို နားထောင်ကြည့်ကြပါ စို့။
“ထိုသို့နောဧကို ဘုရားသခင်မှာထားတော်မူသည်အတိုင်းဝင်သော တိရိစ္ဆာန်တို့သည်၊ ခပ်သိမ်းသောတိရိစ္ဆာန်အထဲက၊ အထီးအမစုံ လျက်ဝင်ကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ နောဧကို အထဲမှာ ပိတ် ထားတော်မူ၏။”
(ကမ္ဘာဦး ၇း ၁၆ ) )
အပိုဒ်ငယ် ခုနှစ်ကို ဖတ်ကြပါစို့။
“ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘေးကြောင့်၊ နောဧသည် မိမိသား၊ မယား၊ ချွေးမ နှင့်တကွ၊ သင်္ဘောထဲသို့ဝင်၍” ( ကမ္ဘာဦး ၇း ၇) )
နောဧနှင့်၎င်း၏မိသားစုတို့သည် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်စေလိုသောအရာမှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ( ကမ္ဘာကြီး ၇း ၁ ) သူတို့သည် သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်ခဲ့ကြသည်။ သင် သည်လည်း ခရစ်တော်အထဲ၌ ရှိနေရပါမည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“သားတော် (ယေရှု) ကို ယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို မခံရ။ ”
( (ယောဟန် ၃း ၁၈) )
“အေးစ်” ဟူသောစကားလုံးကို “အပေါ်မှာ” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ ဒေါက်တာ Zodhiates အဆိုအရ၊ “နေရာတစ်ခု သို့မဟုတ် အရာတစ်ခု” အထဲသို့ အယူအဆ၏အခြေခံ သဘောတရားကို ထည့်သွင်းခြင်းဟု ဆိုလိုသည်။ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်း ကင်အရပ် ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်တွင်ရှိသောယေရှုထံ သို့ လာရမည်။ နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သွားသည်နည်းတူ သင်သည်လည်း ခရစ်တော်အထဲသို့ ဝင်ရပါမည်။ “ယုံ ကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်…..” (ယောဟန် ၃း ၁၈) သမ္မာကျမ်း စာက “ခရစ်တော်၌ရှိသောသူများ” အကြောင်းကို ကြိမ်ဖန်များစွာ မိန့်ဆိုထားပါသည်။ လူသိ များသော ကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုရှိပါသည်။
“ယေရှုခရစ်၌တည်သောသူတို့သည် အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကင်း လွတ်ကြ၏။…..” ( ရောမ ၈း ၁ ) )
“လူမည်သည်ကား ခရစ်တော၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါ ဖြစ်၏။….” ( ၂ ကော ၅း ၁၇ ) )
ရှင်ပေါလုက “ခရစ်တော်၌ရှိသောသူများ” အကြောင်းကို မိန့်ဆိုထားသည်။ ( ရောမ ၁၆း ၇ )
သင်သည် ခရစ်တော်၌ ရှိပါရဲ့လား။ နောဧသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သဘောၤထဲ သို့ဝင်သကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ထံသို့လာရမည်။ယေရှုက ဤသို့မိန့်တော်မူ သည်။
“ငါသည် တံခါး၀ဖြစ်၏။ငါဖြင့်ဝင်သောသူသည် ဘေးနှင့်ကင်းလွတ် လျက် ထွက်ဝင်၍ ကျက်စားရာကို တွေ့လိမ့်မည်။” ( ယောဟန် ၁၀း ၉ ) )
ထိုအကြောင်းကို မည်သို့ရှင်းပြရမည်အကြောင်း တိတိကျကျတော့မသိပါ။ သို့ရာတွင် အမှုတော်မြတ်ထဲ၌ အခက်ခဲဆုံးသောအရာတစ်ခုမှာ ခရစ်တော်ထံသို့လာပါ၊ ခရစ်တော်ထံသို့ လာခဲ့ပါ ဟူသော ရိုးစင်း သောအယူအဆထဲသို့ လူမျိုးကို ဆွဲသွင်းရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့သောနည်းလမ်းဖြင့် ဆိုကြပါစို့။ သင်သည် နောဧလက်ထက်တွင် အသက်ရှင်ခဲ့ သဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကျရောက်မည်အကြောင်း ဟောကြားသည်ကို ကြားသိခဲ့ရသည်ဆိုပါစို့။ သင်္ဘောထဲသို့ဝင်မှသာလျှင် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း ဟောပြောချက် ကိုလည်း ကြားသိခဲ့ရသည်ဟုဆိုပါစို့။ “ဟုတ်ကဲ့” ဟု သင်ဆိုလျှင် မှန်ကန်သောအရာဖြစ်ပါ သည်။ တရားစီရင်ခြင်းသည် လာလျက်ရှိပါသည်။ မှန်ကန်ပေသည်။ သင်္ဘောကသာလျှင် သင်တို့ကို ကယ်တင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်လက်ခံသည်။ သင်သည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘေးမှ လွတ်မြောက်ဖူးပါသလား။ မကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါ။ သင်သည် ချက်ချင်းထ လျက်၊ သင်္ဘောထဲသို့ဝင်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပါ။ သင်ကိုကယ်တင်မည်ဟု ဆိုရုံသက် သက်မဟုတ်။ အမှန်တကယ် ရောက်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်စေ လိုသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် အမှန်တကယ် ကယ်တင်နိုင်သည်ကို မထိုင်ဘဲ ယုံကြည်လက်ခံပါ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ထံသို့အမှန်တကယ် လာပါ။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုသည်။
“ခမည်းတော်သည် ငါ့အားပေးသမျှသောသူတို့သည် ငါ့ထံသို့လာ ကြလိမ့်မည်။” ( ယောဟန် ၆း ၃၇ )
သင်္ဘောက သင်သည် ခရစ်တော်ထံသို့ လာရမည်ဟု ဆိုသည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ သင်္ဘောက အသင်းတော်တည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ ကိုယ် ခန္ဓာထဲသို့လာရမည်ဟုဆိုသည်။
လူများစွာတို့က ကျွန်ုပ်အယူအဆကို သဘောတူညီကြမည်မဟုတ်ကြောင်းကို သိ သည်။ ယနေ့တွင် လူများစွာတို့သည် အသင်းတော်များ၌ မူလတန်ဖိုးလျော့နည်းနေကြသည် သို့မဟုတ် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့လုပ်ဆောင်သောအရာသည် မှား ယွင်းမှုရှိနေသည်။ သင်္ဘောသည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဓမ္မသစ်အ သင်းတော်၏ပုံဆောင်ချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုတွင် သင်သည် အသင်းတော်သို့မည်သို့လာမည်နည်း။ ၁ ကော အခန်းကြီး တစ် ဆယ့်နှစ်၊ အငယ် နှစ်ဆယ့်ခုနှစ်တွင် ဤသို့ဆိုပါသည်။
“သင်တို့သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ဖြစ်ကြ၏။ အသီးအသီး အင်္ဂါ တော်ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် …….အသင်းတော်၌ ခန့်ထား တော်မူ၏။” ( ၁ ကော ၁၂း ၂၇- ၂၈ ) )
ဤနေရာတွင် ခေတ္တရပ်နားကြပါစို့။ “ခရစ်တော်၏ခန္ဓာ” တည်းဟူသောစကားလုံးသည် အ သင်းတော်၊ ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကို တည်ဆောက်ကြစေလိုသည်။ အပိုဒ်ငယ် တစ်ဆယ့်သုံးကို နားထောင်ကြပါစို့။
“ငါတို့ရှိသမျှသည် ဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းအားဖြင့် တကိုယ် တည်းထဲသို့ ဗတ္တိဇံကို ခံကြ၏။” ( ၁ ကော ၁၂း ၁၃ ) )
သင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒေသန္တာရအသင်းတော်တွင် နှစ်ခြင်းခံယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ အသင်းတော်၏အသက်ရှင်သော အသင်းသား၊ စစ်မှန်သောသူဖြစ်သည် ကို ထင်ဟပ်စေသည်။
ယခုတွင် အဘယ်သို့ဖြစ်လာမည်အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သင်၏အလုပ်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုထံသို့လာဖို့သာ သင့်အလုပ်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ယေရှုထံသို့လာသောအခါ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အား အသင်းတော်ထဲသို့ ဗတ္တိဇံပေးမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး ခုနှစ်၊ အပိုဒ်ငယ် တစ်ဆယ့်ခြောက်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့် ကြပါစို့။ နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့လာသောအခါ သမ္မာကျမ်းစာက “သခင်ဘုရားသည် တံခါး ကို ပိတ်တော်မူသည်” ဟုဆိုထားသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၇း ၁၆) ၎င်းက ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ် သည် သင့်အား ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် နှစ်ခြင်းပေးခြင်းဖြင့် ပိတ်ထားကြောင်း ကို မိန့်ဆိုထားပါသည်။ သင်္ဘောက ခရစ်တော်နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဒေသန္တာရအသင်းတော်နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းကို ပြောဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ပါသည်။ သင့်ကို ခရစ်တော်၌ “ပိတ် ထားခြင်းမရှိလျှင်” သင်သည် တရားစီရင်ခြင်းတရားတွင် ပျက်စီးသွားရလိမ့်မည်။ သင်ကို “ပိတ်ထားလျှင်” လုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းမှာ ပြောင်းလဲသောသူတို့၏ ထာဝရလုံခြုံမှုအကြောင်း ကို ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏စကားကို နားထောင်သောသူတို့သည် ပျက်စီးခြင်း သို့ လုံးဝမရောက်ကြပါ။
၃။	တတိယအချက်၊ သင်္ဘောက သင်သည် ကျဉ်းသောတံခါးကို အမှန်ဝင်ရမည် အကြောင်း ဆိုထားသည်။
နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ မည်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သနည်း။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး ခြောက် အပိုဒ်ငယ် တစ်ဆယ့်ခြောက်ကို ကြည့်ကြပါစို့။
“……သဘောၤနံတဘက်၌လည်း တံခါးကို လုပ်ရမည်။….”
( ကမ္ဘာဦး ၆း ၁၆ ) )
ယေရှုက “ငါသည် တံခါး၀ဖြစ်၏။ ငါနှင့်ဝင်သောသူသည် အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်” ( ယော ဟန် ၁၀း ၉ ) ဟု မိန့်ဆိုသည်။ နောဧသည် တံခါးအားဖြင့် သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။ သင်သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်သည်။ ယေရှုက “ကျဉ်းသောတံ ခါးသို့ဝင်၍သွားကြလော့” ( မဿဲ ၇း ၁၃ ) မိန့်တော်မူ၏။ )
တဖန်၊ ယေရှုက ဤသို့ဆိုသည်။
“ကျဉ်းမြောင်းသောတံခါးဝကိုဝင်ခြင်းငှါ ကြိုးစားအားထုတ်ကြ လော့။ အကြောင်းမူကား၊ အများသောသူတို့သည် ဝင်ခြင်းငှါအလို ရှိသော်လည်း မစွမ်းနိုင်ကြဟု ငါဆို၏။” ( လုကာ ၁၃း ၂၄ ) )
အထက်ပါအကြောင်းအရာမှာ နောဧလက်ထက်တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်သောအ ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး ခုနှစ်၊ အပိုဒ်ငယ် လေးကို ကြည့်ကြပါစို့။ ဘုရား သခင်က ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ယနေ့မှစ၍ ခုနှစ်ရက်စေ့လျှင်၊ အရက်လေး ဆယ်ပတ်လုံးမြေကြီးပေါ်သို့ မိုဃ်းရွာစေမည်။……” ( ကမ္ဘာ ၇း ၄ )
အပိုဒ်ငယ် တစ်ဆယ်ကိုလည်း ကြည့်ကြပါစို့။
“ခုနှစ်ရက်စေ့သောအခါ၊ လွှမ်းမိုးအပ်သောရေသည် မြေပေါ်၌ပေါ် လာ၏။”
( ကမ္ဘာဦး ၇း ၁၀ )
နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က သူ့အား လုံခြုံအောင် တံခါး ကို ပိတ်ထားခဲ့သည်။ တံခါးကို ပိတ်ထားခဲ့သည်။ ခုနှစ်ရက်ကြာသော် အဘယ်အရာမျှ ဖြစ် ပျက်မလာခဲ့ပါ။ ထို့နောက် တရားစီရင်ခြင်းသက်ရောက်လာသည်။ အဘယ်သူမျှ သင်္ဘောထဲ သို့ မဝင်နိုင်ကြပါ။ အလွန်နောက်ကျသွားလေပြီ။
“အထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုပါ၊ အထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုပါ” ဟူသော လူတို့၏ အော်ဟစ်သံကို နား ယောင်မိသည်။ သို့ရာတွင် အလွန်ပင် နောက်ကျလွန်းလှပြီ။
ယခုပင် ယေရှုခရစ်ထံသို့လာပါ။ ထာဝရနောက်မကျခင် အမြန်သာ လှမ်းလာပါ။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ မစ္စတာ Mr. Noah Song က ကျမ်းစာဖတ်ကြားသည်။ ကမ္ဘာဦး ၆း ၅- ၈။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Noah Song က ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။
“ကျွန်ုပ်ကြန့်ကြာလွန်းလျှင်"၊ (Dr. John R. Rice, ၁၉၈၅-၁၉၈၀။)
“ထို့နောက်၊ ထာဝရဘုရားသခင်သည် နောဧကို တဖန် မိန့်တော်မူပြန်သည်ကား၊ ဤကာလအမျိုးတွင် သင် သည် ငါ့ရှေ့၌ ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကို ငါသိမြင်သည် ဖြစ်၍၊ သင်၏အိမ်သူ အိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွ၊ သင်္ဘောထဲသို့ဝင်ကြလော့။” ( ကမ္ဘာဦး ၇း ၁ ) )
( ကမ္ဘာဦး ၆း ၈၊ ဟေဗြဲ ၁၁း ၇၊ ကမ္ဘာဦး ၉း ၂၀-၂၁၊ ရောမ ၄း ၅-၆ )
၁။	ပထမအချက်၊ သင်္ဘောက ကယ်တင်ခြင်းရမည်အကြောင်း ခရစ်တော် ၌ ရှိနေရမည်ဟု သွန်သင်ထားပါသည်။ ကမ္ဘာဦး ၇း ၁၆၊ ၁၇၊ ယော ၃း ၁၈၊ ရောမ ၈း ၁၊ ၂ ကော ၅း ၁၇၊ ယောဟန် ၁၀း ၉၊ ယော ၆း ၃၇။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ သင်္ဘောက အသင်းတော်တည်းဟူသော ခရစ်တော် ၏ ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့လာရမည်ဟုဆိုသည်။ ၁ ကော ၁၂း ၂၇- ၂၈၊ ၁၃၊ ကမ္ဘာဦး ၇း ၁၆။
၃။	တတိယအချက်၊ သင်္ဘောက သင်သည် ကျဉ်းသောတံခါးကို အမှန်ဝင် ရမည်အကြောင်း ဆိုထားသည်။ ကမ္ဘာဦး ၆း ၁၆၊ ယော ၁၀း ၉၊ မဿဲ ၇း ၁၃၊ လုကာ ၁၃း ၂၄၊ ကမ္ဘာဦး ၇း ၄၊ ကမ္ဘာဦး ၇း ၁၀။